पत्नी वियोगको पीडा सहन नसकेर पतिले पनि गरे आत्महत्या | Kendrabindu Nepal Online News
1193406 64274 883022 246110
पत्नी वियोगको पीडा सहन नसकेर पतिले पनि गरे आत्महत्या
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार १८:५५
ओखलढुंगा । पत्नी वियोगको पीडा सहन नसकेर एक जनाले आत्महत्या गरेका छन् । चिशंखुगढी गाउँपालिका ६ भदौरेका २२ वर्षीय नविन परियारले आत्महत्या गरेका हुन् ।
गत जेठ अन्तिम साता बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएका नविनको श्रीमती २१ वर्षीय गंगा परियारले गत भदौ ४ गते माइतीमै झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । एसईईको मौका परीक्षा दिन माइत गएको समयमा उनले झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि गंगा घरमा बस्दै आएकी थिइन् भने नविन कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए । तर श्रीमती परीक्षा दिन माइत जाने भएपछि घर आएका नविन परीक्षा सकेको २ दिन पनि नबित्दै श्रीमतीले आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
श्रीमतीले आत्महत्या गरेपछि बिक्षिप्त बनेका नविनले पनि आत्महत्या गरेका हुन् । उनी घर नजिकै रहेको रुखमा सलको पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए ।
नविनले आत्महत्या गर्नुअघि श्रीमतीको नाममा लेखेको चिठ्ठी समेत फेला परेको छ । चिठ्ठीमा उनले लेखेका छन्, ‘प्यारी श्रीमती ! तिमी म भन्दा अगाडी गयौ, म पनि तिम्रो पछिपछि आउँदैछु , यो कदम मैले कसैको करकापले लिएर हैन’ भनि लेखेका छन् ।
Prevपेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा नेपालको ७५ करोड र भारतको ४ अर्ब ४० करोड खर्च
के हो बीपीको समाजबाद ? शशांक, चन्द्रकिशोर र नरहरीको मत (भिडियो सहित)Next
आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
ऋण तिर्न बैंकको ताकेतापछि वडाध्यक्षद्वारा आत्महत्या
आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
युवाका समस्या: पहिला डिप्रेशन, त्यसपछि जीवन नै त्याग
छोरीलाई विष खुवाएर बुवाले गरे आत्महत्या, आत्महत्याबाटै सकियो सिंगो परिवार
लकडाउनमा भोकै परेका पशुका लागी आयांका जोडीको १ लाख सहयोग
लकडाउनमा थप कडाइ गर्ने सरकारको निर्णय
नेपालमा कोरोना संक्रमित नौ जना पुगेदेखि अमेरिकाले मास्क चोरेको जर्मनीको आरोपसम्म (भिडियोसहित)
मकवानपुरको बिसिङ्खेलस्थित जंगलमा भिषण आगलागी (भिडियो सहित)
संक्रमित अझै धेरै पत्ता लाग्ने छन्- डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ
'सेलपे' ले सुरु गर्‍यो घरघरमा सामान दिने 'स्मार्टडोको' एप्स
अध्यक्ष राणाको प्रश्न, आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्दैन ?
गल्फर प्रतिमा फोर्ब्सको सूचीमा
कोरोना परीक्षण व्यापक बनाउन सरकारसँग कांग्रेसको माग